Nokuba ungumnini wevenkile ye-eCommerce okanye ibhlog ye-budding, into ekuphela kwayo zonke iwebhusayithi zinokusetyenziswa kokubhaliweyo kwimixholo. Ukubeka kinnistamine kwisicatshulwa sakho esibonisiweyo (okanye uyilo lochwethezo) akubalulekanga xa Ukudala ubuhle bendawo yakho kunye nokuqinisekisa impumelelo.
Nantsi, unokuba nethemplethi eyoyikisayo ye-WordPress okanye ubeke imifanekiso enomdla kwiwebhusayithi yakho NANGONA kunjalo ukuba usebenzisa ifonti esisiseko engagefundekiyo (okanye okubi kakhulu khani upi koi komi sui komi!).
Kwaye, ulahlekile kubuhle be-typographics ye-gorgeous web efumaneka kwi-Intanethi.
Utte, ukuba ufuna ukuqiniseka ukuba ifowuni ukhetha imithwalo ethembekileyo kwezinye iikhomputha, kufuneka ukhethe "ifayile ekhuselekileyo yewebhu".
Ngethuba le-25 lewebhu ekhuselekileyo yefayili, uya kuqiniseka ukuba unobumba be-web tüpograafia ebalulekileyo kwiwebhusayithi yakho esebenza lonke ixesha, ekupheleni kweli nqaku!
1 Yintoni i-Web’i ohutu font?
1.2 Ngaba kufuneka id-Web Safe Fontide kwiWebhusayithi yam?
2 I-25 I-veebisait on ohutu ja ohutu kwiWebhusayithi Yakho
2.5 9. Jojiya
2.6 11.Uus kuller
2.12 23. Franklini gooti keel
Yintoni i-Web’i ohutu font?
Uninzi eesti arvuti kunye neziphequluli zewebhu ziza kunye nesethi yamagama afakwe ngaphambili ngabavelisi, nangona kunjalo, izixhobo zabo (kwaye ngokuqhelekileyo) ziyahluka. Kwakungekho umgangatho osemgangathweni owenziwe ngabo bonke abavelisi abahlukeneyo.
Ukuba ifayili oyisebenzisileyo ayifakwanga kwikhompyutheni yomsebenzisi, i-website yakho iya kubuyela kwipolisi yesizukulwana, edlalwa ngamanye amaxesha njengokuba ingafundwanga.
Kwamanye ukuphepha oko, abayili bewebhu baye basebenzisa Iifayili ezibalulekileyo zeWebhu ukuba iMicrosoft ikhutshwe kwi-1996 njengomgangatho weendawo ezininzi zewebhu. Le setethi yamafonti ekugqibeleni yaba "iifayile ezikhuselekileyo zewebhu", kuba kungakhathaliseki ukuba ikhompyutha, iifom ziza kubonakala ngokuphepha kwiwebhusayithi yakho.
Ngaba kufuneka id-Web Safe Fontide kwiWebhusayithi yam?
Ukuba ufuna ukugcina i-brand kunye nebonakalayo ye-website yakho iyavumelana, ngoko usebenzisa ifayile ekhuselekileyo yewebhu ukuqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho ibonakala ngokuqinisekileyo njengoko uzimisele ukuba.
Enyanisweni, phantse yonke i-website namhlanje isebenzisa uhlobo oluthile lwefonti ephephile. Abaqulunqi bewebhu baya kuhlala becebisa ukukhetha ifayile ekhuselekileyo yewebhu ukwenzela ukuba ugweme ukuba nefonti eziqhelekileyo, njenge-Times New Roman, ibonakale xa abasebenzisi bavakashela iwebousayithi jaak.
Kukho iindlela ongayisebenzisa ukuzongeza la maxwebhu kwiphepha lakho lewebhu, kodwa ukuba awukho kwiprogramm okanye unamava angama-teknoloji, unokwenza ngokukhawuleza ukukopisha ikhowudi eyi-CSS enobumba kwaye.
I-25 I-veebisait on ohutu ja ohutu kwiWebhusayithi Yakho
23. Franklini gooti keel
Nokuba ungumnini wevenkile ye-eCommerce okanye ibhlog ye-budding, в ekuphela kwayo zonke iwebhusayithi zinokusetyenziswa kokubhaliweyo
Դիտեք Վիքիպեդիան `որպես համացանցային համացանցային ցանց
Intervistë në Web Host: Drejtori Ekzekutiv i WebHostFace, Valentin Sharlanov
Beste persönliche Websites Ive Amboona (uye Nzira Yokugadzira Yako)